ကျန်းမာရေး ဆိုင်ရာဗဟုသုတများ | Page 245 | Dr Myanmar | Myanmar Medical Website
16.11.2016 | ကျန်းမာရေး ဆိုင်ရာဗဟုသုတများ
လူကြိုက်အများဆုံးအနေအထားမဟုတ်ပေမယ့် 8% သောလူတွေက ပက်လက်အနေအထားမှာ အိပ...
ဝမ်းဗိုက်တင်းပြီး ဗိုက်ပွခြင်းက ရောဂါအရင်းခံတခုကြောင့်ဖြစ်နိုင်သလို နေ့စဉ်စားသောက်မှု ပုံစံတွေကြောင့်လည်း ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ယာယီဆိုပေမယ့် အ...
15.11.2016 | ကျန်းမာရေး ဆိုင်ရာဗဟုသုတများ
ပင့်ကူလို့ဆိုလိုက်တာနဲ့ အန္တရာယ်ပေးနိုင်တဲ့အဆိပ်ရှိတဲ့ သတ္တဝါဖြစ်တာကြောင့် လူအများက ကြောက်ရွံ့လေ့ရှိပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ NUI Galway မှာရှိတဲ့ သ...
ရောဂါအကြောင်းရင်းခံကို သေချာမသိရဘဲ ဒူးနာဝေဒနာကို အမြစ်ပြတ်အောင်ကုသဖို့ဆိုတာ မဖြစ်နိုင်ပါဘူး။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ ဒူးနာဝေဒနာကို ခံစားရတဲ့အက...
ရိုးရိုးအိမ်သာနှင့် ဘိုထိုင်အိမ်သာ ဘယ်အိမ်သာအမျိုးအစားကလူတွေနဲ့ ပိုသင့်တော်ပြီး ကျန်းမာရေးနဲ့ပိုညီညွတ်တယ် ဆိုတာနဲ့အငြင်းပွားဖွယ်ဖြစ်နေတာက...
14.11.2016 | ကျန်းမာရေး ဆိုင်ရာဗဟုသုတများ
ဆေးဝါးများသောက်သုံးရာတွင် ကောင်းကျိုးများရှိသလို ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများကိုအနည်းနှင့်အများဆိုသလို ခံစားရနိုင်ပါတယ်။ ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများအနက်...
10.11.2016 | ကျန်းမာရေး ဆိုင်ရာဗဟုသုတများ
တိရစၧာန်ရဲ့အသည်းမှာသံဓာတ်ကြွယ်၀စွာပါ၀င်တာကြောင့် ကျန်းမာရေးအတွက် စားသုံးပေးသင့်ပေမယ့် လိုအပ်တာထက်ပိုစားမိပါက သွေးတွင်းကိုလက်စထရောလ်မြင့်တက်စ...
9.11.2016 | ကျန်းမာရေး ဆိုင်ရာဗဟုသုတများ
1. သွေးကြောကျဉ်းခြင်းကို ကုသပေးနိုင်ခြင်း
2. သွေးတွင်းအဆီဓာတ်ကို လျော့ချပေးခြင်း